#Malema: UMalema ugadle kuDA, wathi akayincengile futhi angayilaxaza | News24
#Malema: UMalema ugadle kuDA, wathi akayincengile futhi angayilaxaza
Durban - UJulius Malema ongumholi we-Economic Freedom Fighters uthi abakhathalelwe kuthenjwa futhi bangayilaxaza iDA uma kungukuthi ayishintshi ukwenza.
UMalema uthi iqembu le-DA nokuyiqembu abakhetha ukubambisana nalo ukuphuca i-ANC amandla koMasipala abafana neTshwane neGoli uthi leli qembu selithwele ilunda kanti lokhu yikona okuzodala uqhekeko kulo mshado wabo.
UMalema usho lokhu ngesikhathi e-phendula imibuzo esithangamini sabezindaba eBraamfontein lapho abethula khona isitatimende seqembu lakhe mayelana namameyili asanda kuvela athinta umndeni wakwaGupta.
UMalema uthi umshado wabo neDA uzolinyazwa yindlela uMeya waseNelson Mandela Bay u-Athol Trollip aziphethengayo ngemuva kokuxosha isekela lakhe eliyilungu le-UDM uMongameli Bobani emhlanganweni.
"Okwenzeka lapha kulo Masipala kubonakalisa ukungancengi nokungafuni ukubambisana namanye amaqembu. Ukulaxaza kwabo i-UDM kungaba nobungozi ngoba uma kungahlehla i-UDM nathi sizothula sibuke-nje," kusho uMalema.NgoLwesibili, iSekela leMeya, uMongameli Bobani, ucelwe ukuba ashiye umhlangano womkhandlu ngemuva kokuthi esola iMeya ngokungathembeki. UTrollip wenze isiphakamiso sokudayiswa komhlaba eWells Estate. Kodwa-ke amaqembu aphikisayo, okubalwa nalawo aphethe ngokubambisana neDA, aphikisene nalokhu.
USomlomo uJonathan Lawack ucele uBobani aphume emhlanganweni. UMaimane uyalele i-UDM ukuba ithathele izinyathelo uBobani ngokuziphatha kwakhe okungamukelekile.
Kodwa-ke umholi we-UDM, uBantu Holomisa, uthe uMaimane kumele adlulisele izikhalo zakhe ekomitini elisungulelwe ukubhekana nokungaboni ngaso linye phakathi kukaTrollip noBobani, esikhundleni sokuthi aye kwabezindaba. “Asikwazi ukuvele sigxume uma ngabe ethi gxumani. Yena (uMaimane) uphume endleleni.”
UHolomisa uthi i-UDM angeke ize idonswe ngekhala iDA futhi angeke yenze yonke into efunwa yiDA ngaphandle kokuxosisana.
"Okwenzeka lapha kulo Masipala kubonakalisa ukungancengi nokungafuni ukubambisana namanye amaqembu. Ukulaxaza kwabo i-UDM kungaba nobungozi ngoba uma kungahlehla i-UDM nathi sizothula sibuke-nje," kusho uMalema.
UMalema uthi iqembu labo alithengwangwa ngasheke futhi alikhokhelwanga lobolo ngakhoke akukho okubaphoqa ukuba bahlale kulo mshado uma bengondlekile.
"Ayikho imali esiyikhokhelwe ukuze sibambisane ne-DA, kodwa wukusebenzisana ndawonye ukuze sithuthukise imiphakathi. Isenzo sikaTrolipp sokulaxaza i-UDM ngeke sisize ngalutho. Uma i-UDM nayo ikhetha ukusishiya lesi sithembu, nathi sizohlala sibukele sisonge izandla, icwile yodwa i-DA,"kuqhubeka lo mholi.
OLUNYE UDABA:Sishiye esingalazi ngoZuma isikhulu esiphezulu se-ANC
UMalema akagcina lapho kodwa ubuye wathi i-DA izolimala ngokufuya uHelen Zille osebonise ngokusobala ukuthi akakalwamukeli ushintsho usadla ngoludala njengoba esancoma ezinye izenzo zikohulumeni wontamolukhuni.
Lo mholi uthi kungani uMaimane esamgcinile uZille futhi kungathi bethi ummisiwe kule nhlangano kodwa usaqhubeka nomsebenzi wokuba wuNdunankulu wesiFunda saseWestern Cape.
Ngokusho kwakhe, uthi uyabona ukuthi uMaimane udonswa ngekhala futhi akanakho ukuzethemba futhi akakwazi ukuzithathela izinqumo njengomholi oqotho nobeka izwe kuqala.